तीन जनामाथि कार*वाही हुन्छ र हुनुपर्छ, भीडको कुरा स्वीकार गर्दैनौं : डीआईजी अधिकारी -
तीन जनामाथि कार*वाही हुन्छ र हुनुपर्छ, भीडको कुरा स्वीकार गर्दैनौं : डीआईजी अधिकारी
काठमाडौं। प्रहरी नायव महानिरीक्षक ‘डीआईजी’ पिताम्बर अधिकारीले नेपाल प्रहरीले कमजोर रुपमा मुद्दा लिएर अदालत नजाने दाबी गरेका छन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा डीआईजी अधिकारीले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालती प्रकृयामा लगेका धेरै केसमा सफल भएको बताए । १०० मा करीब ७२ भन्दा बढीमा अदाती प्रकृयामा सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा ‘आ त्मह त्या दुरु त्साहन’ को राय दिएको र त्यो केस कमजोर बनेको हो भन्ने पत्रकार ऋषि धमलाको प्रश्नमा डीआईजी अधिकारीले भने,‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।’ पत्रकार धमला र डीआईजी अधिकारीबीचको कुराकानीको अंश प्रहरीले शलिकराम प्रकरणमा रवि लामिछाने लगायतले आ त्मह त्या दुरु त्साहन गरेको केस सरकारी वकिललाई बुझायो र मुद्दा दर्ता गरेको छ तर आम मानिसले दुरु त्साहनलाई विश्वास गरेका छैनन् नि ? प्रहरीले व्यवसायीक अनुसन्धान गरेको छ । तथ्यका बारेमा म जान चाहन्न यो विषय अदालतमा छ । आ त्मह त्या दूरु त्साहनको अनुसन्धान प्रहरीले पूरा गरेको छ ।
कसरी दुरु त्साहन भयो त ? त्यसको मिसिलमा भएको कुराहरुको बारेमा म जान चाहन्न । यो सम्मानित अदालतको विषय हो । यसबारेमा जान मिल्दैन । त्यसमा छलफल गर्ने आफ्नै किसिमको इथिक्स छ । जसरी सामाजिक सञ्जालमा र युट्युवहरुमा आएको छ यो गैरजिम्मेवजार र अराजक रुपमा आएको छ ।
आ त्मह त्या प्रकरणमा दुरु त्साहन भनेर तपाईहरुले मुद्दा चलाइरहनु भएको छ, यसले समाजमा विकृति ल्याउने हो कि ?
यो व्यवस्था हामीकहाँ पहिलो थिएन । अपारध संहिता लागू भएपछि यो कार्यान्वयनमा आयो । यो लामो छलफल पछि आएको हो । यो अरु देशमा पनि छ । कानून देशमा शान्ति सुरक्षा होस् भन्नका लागि आएको हो ।
तर कतिपय विज्ञले ऐन कानून कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्नु भएको छ ?
आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म कसैले पुर्याउँछ । कसैले दुरुत्साहित गराउँछ भने ५ वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । अब कानूनले यो पनि कसुर हो भने पछि त्यो कसुर भएको छ कि छैन भएको छ भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरु छन् कि छैनन् प्रहरीले हेर्ने त्यही हो ।
अपराध संहिता पर्याप्त छ ?
कानून पर्याप्त छ । कानून रिजिट विषय होइन । दुरु त्साहनका जम्मा ६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो ठिक भयो कि भएन भन्नका लागि पहिला वहस पैरवी हुनपरो, अदालतको फैसलाहरु हेर्नु पर्यो ।
भिडियोकै आधारमा कसैलाई पोल्न वा फसाउन मिल्छ त उसो भए ?
कसैले भिडियो रेकर्ड गर्यो भने, त्यो प्रमाणको गहनता कति छ कतिको भ्यालिडिटी छ । गहनता र सार के हो भन्ने मुल्यांकन हुन्छ । त्यो प्रमाण हल्का भए त्यो प्रमाणसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण के हो त भन्ने खोजी हुन्छ ।
दुरु त्साहन मुद्दा अनुसार रविजीहरु रिहा हुनुहुन्छ, कि रिहा हुनुहुन्छ कि पुर्पक्षमा जानुहुन्छ ?
म सम्मानीत अदालतको सम्मान गर्छु । यो विषयमा अदालतले आफ्नो निर्णय दिन्छ । प्रहरीले भन्दैन । उहाँ छुट्नुहोला वा जेलमा जानुहोला भन्ने अदालतले भन्छ । प्रकृयामा गयो, भरखर अदालतको ढोकामा पुगेको छ । अदालतले आफ्नो निर्णय गरेको छ । अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गर्ने काम प्रहरीको काम हो । यो प्रमाणले गर्दा यो अपराध सावितसहित दावी गर्दै अदालत जान्छ । त्यसपछि अदालतले भन्छ ।
यो प्रकरणमा तपाईहरु चुक्नु भयो नि ! मुद्दा फितलो छ भन्ने आएको छ.. मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यो फितलो छ कि राम्रो छ कि के छ भन्नेमा म जान चाहन्न ।
सफाइको सम्भावना कति छ ?
यो मेरो जानकारीमा छैन । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो, दाबी गर्ने हो । कहिलेकाही दाबी पूरा हुन्छ कहिले हुँदैन । हामीले अभियोग लगाएपछि यो सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ । हामीले १०० मा करीब ७२ भन्दा बढी सफल छौं अदालती प्रकृयामा ।
रविजीहरुले शालिकरामको आ त्मह त्यामा दुरु त्साहन कसरी गर्नुभयो त ?
आ त्मह त्या हो कि हत्या हो हामीले हेर्ने त्यही हो । आ त्मह त्याको अवस्थामा कसैले पुर्याएको हो भने त्यो दुरुत्साहन हो ।
भीडियोका आधारमा कसरी दुरुत्साहन भन्नु हुन्छ ?
भीडियो लगायतका अरु प्रमाणको पनि जोडिएको हुन्छ । प्रहरीले सबै विषयसँग बुझ्छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणको खोजी प्रहरीले गरेको हुन्छ । प्रहरीको अनुसन्धान त्यति कमजोर हुँदैन ।
भनेपछि सजाय हुन्छ ?
हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने प्रहरीको दाबी हो ।
मानिसहरुले त शालिकरामले त्यतिकै रविको नाम लिएको भन्छन् नि त ?
सामाजिक सञ्जालमा कसकसले के के भन्छ सबै चर्चाको जवाफ दिन सकिँदैन र त्यसको जवाफ पनि हुँदैन । कुरा के हो भने अपराध भनेको सामाजिक समस्या हो ।
जनप्रदर्शन भइरहेको छ सडकमा त्यसलाई प्रहरीले अस्वीकार गर्न मिल्छ ?
यो स्वीकार र अस्वीकारको कुरा होइन । कानूनको सर्वोच्चताको तर्फबाट चल्ने कि भीडले ? कि सामाजिक सञ्जाल र युट्युवबाट चल्ने ? त्यसैले हामी कानून विधीले जे भन्छ त्यसबाट हामी अघि बढ्छौं । भीड सूचनाको स्रोत हाम्रोलागि बन्ला । ओहो भीड ठूलो रहेछ भनेर छोड्न मिल्दैन र पाउँदैन ।
किन आए त जनता रविको पक्षमा ?
प्रहरीले मानिस समात्दा यो केशमा मात्र मानिस सडकमा आएका होइनन् । धेरै केसमा पक्ष र विपक्षमा आउँछन् । सुन्नचाँही हामी सुन्छौं तर भीडको कुरा स्वीकार गर्दैनौं ।
रविमाथि पूर्वाग्रही भएर मुद्दा चलाउनु भएको हो ?
यो स्वीकार गर्दिन । प्रहरीले विना प्रमाण समात्दैन ।
कसैको दबाबमा पक्राउ गर्नु भएको आरोप लागेको छ त ?
होला सडकमा कसैले भन्यो होला । यत्रो भीडाका ककसले के के भन्यो होला ।
रवि जीले म सुरक्षित छैन हिरासतमा भन्नु भएको छ नि के साचो हो ?
गलत, त्यति धेरै सुरक्षा व्यवस्था भएको स्थानमा केही खतरा हुन्छ ?